Dawo laga sameeyay daroogada xashiishka oo lagu daweyn doono suuxdinta - BBC News Somali
Dawo laga sameeyay daroogada xashiishka oo lagu daweyn doono suuxdinta
Xigashada Sawirka, Handout
Dadka qaba xannuunka suuxdinta aadka u xun ee ku nool Britain waxay awood u yeelan doonaan in ay helaan dawo ka sameysan maandooriyaha xashiishka, laga billaabo horraanta sannadka soo socda. Waxaa sameeyay laanta caafimaadka u qaabilsan UK ee NHS oo dedejisay soo saaridda dawadan.
NHS waxay sheegtay in dhaqaatiirta ay bukaannada u qori doonaan dawada Epidyolex - taas oo la ansixiyay bishii November - waxayna cisbitaallada diyaar ku noqon doontaa 6-da bisha January.
Waxaa la siin doonaa carruurta laba sano jirka ah ee xanuunkaas qaba iyo sidoo kale dadka waaweyn.
Tijaabo caafimaad oo lagu sameeyay waxaa lagu ogaaday in xal degdeg ah ay leedahay dawada ay ku jirto cannabidiol (CBD), taas oo yareyn karta tirada waxa sababa suuxdinta carruurta qaar ka mid ah, illaa boqolkiiba %40.
Dawada waxaa loo adeegsan doonaa daweynta laba nooc oo suuxdin ah oo dhif ah, oo na aad u xun, kuwaas oo ka soo billowda suuxdinta xilliga carruurnimada. Waxay kala yihiin Lennox Gastaut iyo Dravet - kuwaas oo maalintii dhowr goor qofka ku sababi kara in uu suuxo.
Agaasimaha guud ee qaabilsan waaxda arrimaha Suuxdinta, Philip Lee, wuxuu soo dhoweeyay shaacintan, wuxuuna yiri, "Waa tallaabo keeneysa rajadii aadka u badneyd ee la qabay, waxayna bukaanada qaar u noqon kartaa isbedel caafimaad oo heer sare ah".
Si kastaba, wuxuu hadalka ku daray in Epidyolex aysan ahaydn "xabad dahabi ah" loona baahan yahay in shaqo badan la qabto "si loo soo uruuriyo caddeyn heer sare ah oo la xiriirta wax ku oolnimada dawooyiinka laga sameeyay xashiishka".
Dabagal ay NHS sameysay horraantii sannadkan waxay ku ogaatay in "caddeyn la'aanta" ay dib u dhigtay dawada laga sameeyay daroogada xashiishka, taas oo dhaqaatiir gaarka ah loo ogolaaday in ay bukaannada u qoraan ka dib markii sharciga la badalay, sannadkii 2018-kii.
Go'aan ah in dawada ay diyaar ku noqoto dhammaan cisbitaallada UK, ayaa la meel mariyay.
Agaasimaha NHS, Simon Stevens, ayaa sheegay in dawadan cusub ee suuxdinta loogu talagalay, ay hadda heli karaan kumannaan qof oo xanuunkaas qaba "taas oo isbedel weyn ku sameyn karta caafimaadka dadkaas".
Diyaarad uu leeyahay madaxweyne oo laga helay daroogada cocaine-ta
Iibinta xashiishka ee Uruguay oo la fasaxay